आफ्नै कथा Archives - पेटबोली ...!
आफ्नै कथा Archive
बाटो छेउको घर: मुर्दाको डर, पीडाको घर
शहरतिर झरेपछि थाहा भयो, बाटोको छेऊको घर घडेरीको भाउ कति धेरै हुन्छ। झन् घडेरीको तीनैतिर बाटो हुने हो भने त त्यो त सुनकै टुक्रा। बाँदर लड्ने ठाउँमा जन्मेको मजस्तोलाई भने यो तीनतिर बाटो र बीचमा घर हुँदा अनेक तनाव हुन्थे। रोडा ढुंगाले भरपुर बाटोमा कोही मान्छे चाँडोचाँडो	Tweet
आफ्नै कथा, व्यङ्ग साहित्य
मैले अलि कठोर आवाजमा भनेँ, ‘सरकार, यो गलत हुन्छ। आवेशमा नआइबक्स्योस्। यो कदम राजदरबारको लागि महँगो पर्छ। यो १७ साल होइन, जनता धेरै बुझ्ने भइसके। राजतन्त्र संकटमा पार्ने काम नगरिबक्स्योस्।’ मैतिदेवीको प्रहरी विट बाहिर म आधा होश र आधा बेहोशीको अवस्थामा थिएँ। मैले आफूलाई सम्हाल्ने कोशिस गर्दै	Tweet
आफ्नै कथा, समाज
‘म कति लाचार छु भने हजुरसँगको सम्बन्धका बारेमा आफैसँग बाहेक कसैसँग बताउन सक्दिनँ।’ पुतलीसडकको क्याफे। २ बजे। क्याफे खाली खाली छ। काउन्टरमा एकजना बसेर क्याल्कुलेटरमा हिसाब गरिरहेका छन्। वेटरहरु खाली टेबल पुछ्दै, कहिले रुमाल यता मिलाउँदै, कहिले उता मिलाउँदै छन्। काउन्टरको ठ्याक्क अगाडि एकजोडी प्रेमी बसेका छन्। दुवैले	Tweet
जतिबेला बच्चा थिइयो त्यतिबेला केटाकेटी नै थिइयो जस्तो लाग्छ के अहिले सम्झिँदा। खासमा म बच्चामा कस्तो थिएँ भनेर मलाई कसैले सोधे भने मसँग जवाफै हुन्नँ। अहँ, मलाई पटक्कै थाहा छैन म जन्मिँदा कस्तो थिएँ। बोल्न कसरी सुरु गरेँ, जन्मिँदा कसरी रोएँ, पहिलो शब्द के बोलेँ? दाँत आउने	Tweet
मलाई माफ गर, तिम्रो माया मार्नै सकिनँ
आँखाले देखेसम्म हेरेँ घरको छतमा बसेर- चन्द्रमा आफ्नै प्रकाशमा चम्किरहेको थियो। घामले बिदा लिएपछि आजकाल चन्द्रमा प्रकाश छर्न आइपुग्छ। गोधुली भर्खरै मात्र बितेको थियो, सायद त्यसैले चन्द्रमाको छेउमा एउटा मात्र तारा देखिएको थियो। आफ्नो चमक बढाउँदै लगेको चन्द्रमा र छेउमा देखिएको सानो तारा देखेर सोचेँ- चन्द्रमा तिमी	Tweet
आऊ, हामी बाँचेरै प्रेम अमर बनाऊँ !
फेब्रवरीको महिना चलिरहेको थियो। ‘सारा संसार भुलेर म तिमीमा समाहित हुन चाहान्थेँ, भए भरको प्रेम तिमीमा पोख्न चाहान्थेँ,’ मेरो शब्द यिनै थिए। ‘म हजुरमै समाहित हुन चाहान्थेँ सारा संसार भुलेर, सारा नियम मिचेर, तर विछोडको पीडाले पिरोल्छ र सबै इच्छाहरु चिहान बन्छन्,’ उनको जवाफ यस्तै थियो। धेरै	Tweet
मेरो बकपत्र !
धेरैपटक म आफैलाई सोध्छु, म को हुँ? म के थिएँ? म किन यस्तो भएँ? के म मृतात्मा हुँ? म मा केही भावना छैनन्? वा मेरो जन्मले नै मलाई यस्तो बनायो? या म हुर्केको परिवेशले मलाई संसारको पर्बाह नगर्ने बनायो? यी प्रश्नहरु फगत मेरा लागि हुन्। अनि यो	Tweet
अब म एउटा कार किन्छु !
अब म एउटा कार किन्छु सुशासन दिने एउटा सरकार किन्छु ! झम्‌झम् बर्सेको झरी झरीले रूझाएको एउटा शरीर सडकमा हुइँकिएका सवारी र फूटपाथमा थुप्रिएको फोहोरका बीच निथ्रुक्क म सवारीको हुइँक्याइँले लपक्कै हिलोपानीमा मुछिएर छेउमा सिठ्ठी फुक्दै गरेको सरकारलाई गुहार्छु पानी पर्दा रेनकोट लाउनुपर्छ भन्ने थाहा छैन?- सरकार चिच्याउँछ म	Tweet
नेक्सस् ५ सँगका तीन महिना (फोटो ब्लग)
म व्यवसायिक फोटोग्राफर होइन। मसँग DSLR क्यामेरा पनि छैन, अनि फोटो खिच्नको सोखिन पनि हैन। तर कहिलेकाहीं सँगै भएका साथीहरूले फोटो खिच्न थालेपछि साथमा रहेको मोबाइल निकालेर जानिनजानी क्लिक गर्छु। अनि त्यही यताउता डुल्दा, मन नलागि नलागि खिचेका केही फोटाहरू यता राखेको मात्र हो। यी फोटा मलाई राम्रा	123	सामाजिक सन्जाल	अनन्त कोइराला
मेरो नाम अनन्त कोइराला हो। म आफूलाई पत्रकारिताको विद्यार्थी भन्न रूचाउँछु। पत्रकारिताको अध्ययनकै शिलशिलामा जगदम्बा प्रकाशनमा सह-सम्पादकको रूपमा काम गर्न पुगेँ।
पत्रकारिता मेरो रूचीको बिषय हो र पढाइपनि यसैमा गरेँ। पढाइ र रूची दुवैले अन्नपूर्ण पोस्ट्को अनलाइन सम्वाददाताको रूपमा जागिरे बनायो। तर ११ महिनापछि म अन्नपूर्ण पोस्टबाट पनि अलग भएँ।
मेरो ब्लग मेरो छायाँ हो। यी मेरा भावना हुन्। काल्पनिकता मेरो दिमागभन्दा बाहिरको कुरो। मलाई लेखाइमा व्यंग्यात्मकता मन पर्छ तर सँधै त्यस्तो लेख्न गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यही भएर म मेरै कथा, मेरै इतिहास र पत्रकारिताका बारेमा लेख्छु :) ब्लगमा प्रस्फुटित विचार मेरा नीजि हुन् भनेर त लेख्नुपर्दैन होला।
बाटो छेउको घर: मुर्दाको डर, पीडाको घर	मेरो यो प्रेमपत्र... !	CategoriesCategories
Follow me on Twitter	Tweets by @anantabrt
Email Address	छिमेकी ब्लग
अपराध डट कम
Recent CommentsSuman on हात्माकथा !Aditi on हात्माकथा-२: छुसीहात्माकथा-२: छुसी - पेटबोली ...! on हात्माकथा !Ananta Koirala on भूतSunil Nepal on भूत	Copyright: anantabrt.com